Akhri:- Warmurtiyeed Laga Soo Saaray Shirkii Garowe+Sawirro. – SBC
Akhri:- Warmurtiyeed Laga Soo Saaray Shirkii Garowe+Sawirro.
Maanta ayay soo saareen dhinacyaddii uu shirka uga socday magaalo madaxda Puntland ee Garowe, war murtiyeed ka kooban todobo qodob, kuwaasoo qaarkood dadku aad u xiisaynayeen.
Waxaa lagu cadeeyay qoraalkan in Puntland uusan saamayn ku lahayn mamulka gobaladda dhexe, dad ka socdaaa Puntland-na aysan ka qayb gali Karin, taasoo macnaheedu yahay mamulka inuu ku kooban yahay Galmudug iyo Galgaduud.
Dastuurka iyo Arrimaha Federaalismka.
Hoos ka dhageyso warbixin Uu Ka Diyaariyay Wariye Maxamed Siciid.
Hoos ka Akhri Warmurtiyeedka: